Qorshaha Kenya waa mid Gorgortan oo Garabyo kalena ay Riixayaan (dhegayso) – Radio Daljir
Qorshaha Kenya waa mid Gorgortan oo Garabyo kalena ay Riixayaan (dhegayso)
Juunyo 4, 2019 7:02 g 0
Dhawaan dawladda Kenya waxa ay si dadban dib ugu soo cusboonaysiiyey dabacyadeedii siyaasadeed iyo dhul ee ku aaddanaa Soomaaliya oo ay wadaagaan xudduud dheer oo bad iyo birriba leh, balse aan ku dhidbanayn soodin sharci oo labo waddan heshiis ku yihiin, marka laga reebo xariijimayntii gumeystaha Ingiriiska, taasoo badanka waddama Afrika ay la wadaagaan.
Kenya, ayaa bilihii la soo dhaafay qaadday tallaabooyin isku xiga oo wax dhimaan ku ah dariiqyada duullamaasiyadeed, siyaasad iyo daris wadaagidba, kadib markii ay burisay heshiisyo dhawr ah oo kala dhaxeeyey Soomaaliya, kuwaasi oo taabanayey socdaalka dadyowga labada dal, ganacsiga, iyo darisnimadaba iyo arrimo kale.
Tallaabooyinkaasi ay ka qaadatay Kenya dalka iyo dawladda Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda ee ICJ uu horyaallo kiis loogu daco-qaadayo Soomaaliya iyo Kenya, kadib markii dawladda Kenya ay sheegatay qaybo ka mid ah biyo badeedka Soomaaliya.
Haddaba Dawladda Kenya tallaabooyinkeeda cusub ee ay wax uga baddeshay heshiisyadii isku socodka ee labada dal, isku furnaantii ganacsi iyo middii duullamaasiyadeedba maxay uga golleedahay? Maxaase ka dhaxeeya arrimahaan iyo murankii badeed? Su’aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan waydiinay Axmed Sh Maxamuud oo ah xeeldheere muddo badan ka shaqaynayey arrimaha duullamaasiyadeed ee Soomaaliya, kana soo shaqeeyey waddamo ay ka mid yihiin Kenya, USA iyo Sweden, siiba wixii ka horreeyey 1980-kii, Sidoo kalena gudaha dalka ka soo shaqeeyey, siiba wasaaradihii arrimaha dibedda iyo waxbarashada ee dawladdii Kacaanka ahayd ee Soomaaliya.
Kenya: “Xoog baan adeegsan doonnaa si aan u xallino khilaafka Soomaaliya!”